izivakashi eziningi njalo ngonyaka bamagange ukubona "inhlokodolobha Northern" - edolobheni Petersburg. Izivakashi zilungele indawo yokuhlala amahhotela eziningi, endlini yezihambi, emahostela yonke ukunambitheka kanye nengcebo. Kuncike kumakhasimende, nakanjani kokuhlala ezimnandi "Sokos Hotel", ingxenye edumile emhlabeni wonke uchungechunge lwamahhotela «Sokos Amahhotela», etholakala maphakathi zomlando zomuzi, eduze Academy of Fine Arts. Ngaphezu zikanokusho ukhululekile guest amakamelo, izivakashi bayojabulela endaweni ethulile, ukuphefumula umlando ezitaladini futhi budebuduze naleli ezikhangayo ezinkulu yonke indawo yedolobha lasendulo.
Ihhotela "Sokos Hotel Vasilievsky" indawo
Ihhotela isendaweni lesishiyagalombili Line Vasilevsky Island, 2.5 km maphakathi Petersburg. It kungenziwa kalula ohlanganiswe ukubukeka zomlando zomuzi, etholakala esakhiweni mlando eyaqala yekhulu nesishiyagalolunye, muva nje uye wenziwa sokubuyiselwa. Vala ngokwanele ukuba komuzi main ISIZINDA yezokuthutha: kufika "Vasilyevskaya" metro station engafinyelelwa kwemizuzu engu-10, eMoscow sesitimela itholakala 5 amakhilomitha kusuka ehhotela, Pulkovo sezindiza - 18 amakhilomitha. Kusukela ehhotela, ungahamba ngezinyawo waya Academy of Fine Arts, uMfula iNeva kanye Annunciation ibhuloho, imizuzu emihlanu ukuzihambela baye Menshikov Palace, imizuzu eyishumi nanhlanu ukuhamba kusukela ehhotela ahlukaniswe Winter Isigodlo kanye Hermitage, Admiralty kanye Amathe ka Vasilyevsky Island. It kungokwalabo edumile emhlabeni ehhotela Finnish ngamaketanga. Petersburg, wavula amahhotela ezintathu nge 4-5 izinkanyezi, kuhlanganise ezimbili - ku Vasilyevsky Island. Inikeza indawo esilungele indawo. "Lenexpo" kuyinto drive ngomzuzu eziyishumi kude, ibuye etholakala eduze itheku.
"Sokos Hotel Vasilievsky" has izinkanyezi ezine, okwenza kube ezikhangayo nabantu abaningi abadumile kusukela izwe yobuciko noma kwezombangazwe noma nje holidaymakers ezinakekelayo induduzo nokuphepha kwabo. izivakashi zayo ihhotela linikeza 255 amakamelo, kuhlanganise 198 ejwayelekile, eyenzelwe abantu ababili, amakamelo 32 aphakeme, 10 eyayihambisana yokugcina, 14 Suites futhi amakamelo esigabeni esiphezulu. Zonke amakamelo anemisila elineshawa noma ubhavu, i-TV futhi iphephile futhi unawo wonke kunesidingo imishini yezobuchwepheshe, kuhlanganise izindawo zokungena broadband.
isimo ethokomele kudala ithoni obomvu ithulisiwe, ifenisha ukhululekile futhi izakhi nenhle ingaphakathi. Zonke amakamelo, imihubhe kanye amahholo ungabona izinto eziqoshwe ngamathambo ezindlovu kanye imidwebo ngabaculi abasha nekwetfula imisebenzi yabo kule igalari yobuciko yesimanje. Zonke ziphephile angathengwa uma uthanda. Kukhona indawo abantu abakhubazekile, okuyinto ingashintshwa ukuze izidingo ezithile izivakashi.
Double kuzo segumbi zokhahlamba kusuka ruble 4500-5500, nge single -. 3900-4700 ruble, kuncike asesigabeni .. Intengo kuhlanganisa ibhulakufesi, emele lezitsha.
Ihhotela siqukethe izindlu kabusha kwekhulu le-18, eyakhiwa kabusha njengoba injalo manje, kuhlangene isitayela izindlu zanamuhla etholakala ngemuva. Lesi sakhiwo esisha itholakala 255 amakamelo, kwesigamu ezingabuyiselwa izakhamizi.
Imibala main - burgundy, kuhlanganiswe kahle mahogany ifenisha, okunikeza yizicukuthwane izinombolo ehloniphekayo.
Izivakashi Umenyiwe uvakashele ku-isayithi yokudlela «Brasserie Repin», unikeza anhlobonhlobo cuisine French kanye Russian. Isibhakabhaka siyagcinwa umoya eko kwekhulu elidlule nge touch ukukhanya yesimanje. Ngesikhathi esifanayo yokudlela angazamukela kuze kube izivakashi 150.
Isibhakabhaka Okuningi ekhululekile ebusa ku ethokomele yokwamukela izivakashi bar, esakhiwa amakamelo amathathu, ngalinye elikwazi abantu 20, lapho ungakhululeka nge iphephandaba phezu inkomishi yekhofi. Ungase uthande ukudlala umdlalo ibhodi kukhanyiswe amakhandlela noma dinner eqotho. Ihhotela futhi inikeza igumbi itiye. izinkampani Jolly ukujabulela umculo pub "umugqa 8" lapho nawe ungadla cuisine eqotho Italian noma American kanye ubhiya. Njalo ngeviki nazi bands bukhoma ukuthi ukudlala e isitayela "abantu" noma abenza umculo Celtic.
Kubantu ibhizinisi "Sokos Hotel" linikeza ukusizakala namakamelo awo amabili inkomfa kubantu abangu-60. Business Centre siqukethe emakilasini amahlanu, nokuba indawo engu-30 kuya 75 square metres, lapho ungakwazi kahle ukubamba seminar, izinkulumo, hlela inkomfa yizilaleli nelungiselelo ezidingekayo ifenisha kanye indawo abahlanganyeli. Zonke amakamelo anemisila ukufinyelela internet.
Isakhiwo ehhotela sihlanganisa ejimini kanye nokuvivinya umzimba ngendlela imishini kanye sauna. yokupaka Private komhlaba yakhelwe izimoto ezingu-30. Ukuze nabahamba njalo abakhetha ukuhlala kwamanye amazwe ehhotela "Sokos" uhlelo, zikhona izinhlelo ezikhethekile ibhonasi, anikeza izinzuzo ezengeziwe on the amakhadi S-Card kanye Finnair Plus.
inkonzo concierge uhlale ulwazi kanye oda amathikithi eziwusizo futhi inkonzo nganoma iyiphi izenzakalo kanye nokuvakashela futhi nihlela izinto ezihlukahlukene.
"Sokos Hotel Vasilievsky": Spa
Thanda star hotel zonke yesimanje lapha, kanye namasevisi ejwayelekile ahlinzekwa, nokuningi ezenza ukuphila eziphilayo bekhululeke kakhudlwana. Ngokwesibonelo, ehhotela "Sokos Hotel" has spa kulabo abafisa ukuba ngehlise umoya futhi linebanga ukwelashwa, hhayi kokushiya. I "Ibhuloho Sokos" inkonzo Spa is kukhulu, ayefisa ukufana nabo nganoma iyiphi resort nokuzijabulisa eziyinkimbinkimbi: Izivakashi mema chitha isikhathi echibini enophahla ingilazi kanye pergolas, zimi khona kanye emanzini. Imishini ekhethekile ngokudala izimpophoma yokufakelwa. Ungakwazi phumula futhi ube ephefumula ezomile nasemihumeni usawoti. Ngaphezu ngqo Spa, kukhona ukuzivocavoca nobungqabavu amakamelo. Konke lokhu izinqubo engenziwa ngqo kusayithi, okuyinto ekahle kakhulu izivakashi.
Ihhotela "Sokos Hotel Palace Bridge"
Petersburg, kunesinye ummeleli we-Finnish hotel chains. Lokhu aphambili "Sokos Hotel Palace Bridge" esisogwini Amathe ka Vasilyevsky Island. Bheka ku-«Solo» uhlobo, okuhilela lokubhalela classic kanye imiklamo eziyingqayizivele. amakamelo Chic nge okuncane nokugqamisa yaseScandinavia opholile iyashintsha iyaphupha ibe imibala, ifakwe eliphezulu ifenisha ukhululekile, ibha encane, satellite TV, kanye nekamelo lokugezela konke okudingayo. Air conditioning kuzoqinisekisa lokushisa emnandi. Ukuze yokungezwani komzimba abaphethwe abantu abakhubazekile ahlinzekwa amakamelo ezikhethekile. Izikhungo oluhambisana inkanyezi.
Catering kuyinto anabamemezeli eziyinkimbinkimbi:
278 amakamelo lwezigaba ezahlukene;
26 amafulethi hati ngeliviki (Ezinye);
Indawo yokudlela «Portofino» futhi «Sevilla», wokubawa abantu bayisekele ibha Bridges, Garden Cafe, Ibha yewayini Eliseev, club ebusuku I Cellar;
IHholo aerobics, ukuqina kanye bowling;
7 amakamelo Convertible for izingqungquthela yebhizinisi, okuyinto angazamukela abantu 350;
Ihhotela ebizwa ngokuthi Sokos Hotel Palace Bridge, okuyinto uhumusha njengoba "Palace Bridge". Lesi sihloko okuhambisana ngokuphelele ne nethimba lakhe. Ubonakala ibhuloho okuyinto ungathola ku impilo yobukhosi, okusho iholide esimweni zikanokusho: amakamelo ifakwe rich nenhle, ikhono ngokushesha ukuqhuba ibhizinisi emakamelweni ngokugcwele elihlomile. Ukunakwa kuzivakashi izici izitolo zokudlela nezindawo zokuphuza, an amazing Spa System.
Ihhotela "Sokos" ku-T inikeza izivakashi zalo 319 amakamelo ukhululekile, 21 okubhekisele Suites kanye 11 okunethezeka ezintathu efulethini lokulala ukuhlala cishe enwetshiwe. I Sokos Hotel Palace Bridge ukuthula nokuzola ukuthi kuzosiza uphumule esimweni ezolile futhi bayakhohlwa umsindo befuna edolobheni elikhulu.
Uphakeme usayizi Room 30 square metres has a yokugezela ifakwe izibuya evuthayo, okuyinto nakanjani bayakwazisa abalandeli cwilisa emanzini afudumele.
Eleven amafulethi ukhululekile zenzelwe abathandi okunethezeka kanye nobumfihlo, okuhleliwe Petersburg esingaphezu kosuku olulodwa. Kukhona ekhishini enkulu ngamanye ifakwe wonke amadivaysi ukupheka kudingekile nemishini mazwi, indlu yangasese ukhululekile futhi eshaweni.
Insimu zokuzilibazisa nobuhle
Ihhotela kubhekwa ukuba spa, njengoba kufaka omkhulu eziyinkimbinkimbi «Spa & Wellness Umhlaba», lapho ungakwazi ukuxoxa emhlabeni sauna «Sauna Umhlaba», poprovat izinhlobo ezahlukene umphefumulo emhlabeni komphefumulo «Shower Umhlaba», zifezeke e ukuzivocavoca, uphumule " Spa yami »noma uvakashele« Day Spa ». Ubuhle nokucwala ezimbili Boutique yabo siqu usizo njalo bheka ezingeni eliphezulu kakhulu.
Njengezinye amahhotela of ezingeni lelifana nele, ihhotela "Sokos" Spa ukwelashwa unikeza kuze kube 22.00 (nezingane kuze kube 18.30). Lokhu kuhlanganisa kahle-isikhungo ngaphansi ATRIUM ingilazi, lapho ungavakashela lwaseRoma yokubhukuda, zihlale obishini, ukuzwa ukushisa kanye cryo-wefonti, sebenzisa cishe zonke izinhlobo sauna (Finnish, ungene, okugeza isiRashiya, caldarium, Hammam, umusi sauna, Igumbi iqhwa-womhume sauna). Ungavakashela Igumbi ukwelashwa noma isiyingi futhi eshaweni imvula. Wishes ulondoloze isimo yayo ukukutholela emakamelweni amabili ukuqina kanye nokuvivinya umzimba ngendlela imishini noma imishini ukusetshenziswa cross-ukuqeqeshwa. Yikuphi ingxenye ehhotela "Sokos" spa ubhekwa gqamisa lesikhungo futhi ikhanga izivakashi eziningi ubuye.
Izivakashi bangaqaphela ikhono abapheki zokudlela ezintathu. Basuke ise eziyinkimbinkimbi ehhotela, okuyinto ekahle kakhulu izivakashi. «Sevilla» The yokudlela lihlotshiswe ngesitayela Spanish. Murano ingilazi Chandeliers, okwakwenzelwa kulo lingakanani, futhi abomvu izitini izindonga ukudala indawo ezifanele. Ekuseni ungaba sasekuseni ngokuba "lezitsha", futhi kamuva - futhi ukhonza ukudla neziphuzo eSpain. Ngokuthakazelisayo kudivayisi Bridges-yokwamukela izivakashi bar, kuhlanganise endaweni aziphumulele lapho ungakhululeka phezu SOFAS ngu eziko, futhi ikhefi ngqo kuleli bhuloho, alinikela Ungadla futhi izitsha Russian. Yokudlela «Dans Le Noir» ungathola emizweni engavamile, ne ukudla ebumnyameni ephelele.
Ihhotela Solo Sokos Palace Bridge inikeza etholakalayo Igumbi inkonzo. Ungasebenzisa izakhiwo isikhungo ibhizinisi, zokuhlanza owomile nelondolo, ayina inkonzo oda. Usizo izivakashi ukuhlela ukubona indawo izinkambo, amathikithi amakhonsathi neminye imicimbi, nokuhlela ezokuthutha kunesidingo. amasevisi abo bekulungele ukunikeza onogada basemafulethini, nokugada abantwana, abasebenza ubusuku edeskini iwashi reception. Kukhona igumbi esikhethekile umthwalo, umshini ukheshi kanye exchange. Ukuze imoto abanikazi bamenyiwe ukushiya izimoto ephephile yokupaka komhlaba.
"Ibhuloho Ihhotela Sokos" - kwelinye lamahhotela amathathu Finnish uchungechunge lwamahhotela, has izivakashi eziningi njalo abazazisayo, ziphephe, nasezingeni eliphezulu of service.
Abaningi zinengxenye "Sokos Hotel Vasilievsky" SPA-isikhungo, ukusebenza kusukela 7,00 am kuya 22.00. Leli yithuba omkhulu ukubaleka sezulu elibuhlungu Petersburg. Iningi ukukhuluma ngakho njengoba yindawo enhle ukuze uphumule futhi ukuzijabulisa spa. "Sokos Hotel Vasilievsky" - isibonelo esihle Finnish uchungechunge lwamahhotela, ihlanganisa amakamelo ukhululekile, inkonzo ephelele futhi zaziziningi izici ezengeziwe yokuchitha isizungu.
Crete: Izibuyekezo zezivakashi
California (isimo) mbukwane. Ama ifotho, incazelo
Ezokuzijabulisa eziyinkimbinkimbi "Sonkin Lagoon": ukubuyekezwa, amasevisi nezici
Kanjani ukusuka Adler ukuze Abkhazia bebodwa?
Kirill Benediktov: Biography nemisebenzi
Ngokocansi poppers ivuselela: ukubuyekezwa, isicelo kanye nempumelelo
Izingane isinyathelo ugandaganda: izici nezincomo ukukhetha
Jikelele imiqondo kwendawo: emazweni, amazwekazi, izilwandle
Entreprise - kuwuhlobo inhlangano ibhizinisi ezigcawugcawu. "Enterprise Russian" Andrei Mironov
Komodo isibankwa - umdondoshiya elinganeliseki uyakwazi parthenogenesis
Kubiza okungakanani inani lezinso zomuntu? Kubiza malini eMoscow naseRussia?
Botox esiphongweni ukuhwaqabala noma ngokwanele!
Amaholide e-Israel - ezindaweni ezithakazelisayo namahhotela eJerusalema.